Myanmar (Burmese) New Films “Yin Khon Hnin Si” & “A Story Long Ago” are coming to Los Angeles Independent Theater | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » Myanmar (Burmese) New Films “Yin Khon Hnin Si” & “A Story Long Ago” are coming to Los Angeles Independent Theater
Posted by infoNetMAA on Aug 7, 2010 in Cultures |6comments
Two new Myanmar (Burmese) films, “Yin Khon Hnin Si” and “A Story Long Ago,” sponsored by the Network of Myanmar American Association (NetMAA) will be shown at the 3nd Myanmar Film Festival in Los Angeles on August 14 & 15, 2010. The festival will beatwo-day event. The movie, Yin Khon Hnin Si, is directed by Aung Swe Myanmar, with starring famous actors: Kyaw Thu, and Sai Sai Khan Hlaing, and famous actresses: Moh Moh Myint Aung, and Thet Mon Myint.
The NetMAA is proud to share the rich Myanmar culture through the medium of cinema. Come to have this experience together and beapart of the fun, glamour, and excitement ofatruly Myanmar community event, celebrating the most lucrative, enduring, and most significant cultural art forms: Motion Pictures. Please come enjoy Myanmar (Burmese) Film Festival, Los Angeles.
View all posts by infoNetMAA →
နောက်တပါတ် တနင်္ဂနွေနေ့ (သြဂုတ် ၁၅) မှာလုပ်မဲ့ဒီပွဲက ရုပ်ရှင်ရုံမှာလုပ်မှာပါ။“ပုံပြင်ဟောင်း”ကားက မြန်မာပြည်မှာလည်း ရုံမတင်ရသေးပါဘူး။
ဒီက ဒါရိုက်တင်းနဲ့ ကျောင်းပြီးထားတဲ့ မြန်မာလူငယ်ဒါရိုက်တာက ရိုက်တဲ့ကားပါ။ “ရင်ခုန်နှင်းဆီ”ကတော့ မြန်မာပြည်မှာ တင်ပြီးသား ကားပါ။
ကားနဲ့လာရင် လစ်တဲတိုကျိုမှာကားရပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ရင်လဲ ရပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေနဲ့ နေရာတူတူပါပဲ။
အရင်နှစ်တွေက အကယ်ဒမီချိုပြုံး၊ ဒါရိုက်တာမီးပွားတို့လာခဲ့ကြပြီး ဒီနှစ်တော့… ကိုကျော်သူကားကို ထုတ်လုပ်တဲ့ ပရိုဂျူဆာကိုယ်တိုင်ရောက်နေပါတယ်။
ကြည့်ရတာ သူပြန်ရင် မြန်မာရုပ်ရှင်လောကအတွက် စက်တွေပြန်ပါသွားမယ်ထင်ပါတယ်။ ကောင်းပါတယ်။
အဲဒါ မြန်မာပြည်က ဘယ်ကားတွေ၊ ဘယ်သူတွေ နောက်နှစ်ရွေးရမယ်ဆိုတာ ရုပ်ရှင်ဝါသနာပါသူတွေ ကောမန့်ရေးပေးထားစေချင်တာပါပဲ။
နိုင်ငံတကာဝင်တိုးလောက်တယ်ဆို ကားအမည်၊ လူအမည်လေးတွေ….ဒီမှာပဲ တင်ထားပေးကြပါလို့..။
အာရုံဦးမှာပွင့်သည့်ကြာ ကားကြီးတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့နော…။
အာရုံဦးမှာ ဖူးသည့်ကြာက နာမည်ကြီးနေတာဘဲ။ ဒီမှာ နေတဲ့ လူတောင် ပေါလက်စီ ကားဖြစ်နေလို့ အချိန်ကုန်ခံ ပြီး ကြည့်ကို မကြည့်တာ တိုင်းတပါး အားပေးတယ်ပြောပြော ကိုရီးယားဘဲ ကြည့်နေတာ မကြည့်လိုက်ရဘူး အခုနာမည်ကြီးမှ ကြည့်ချင် စိတ်ပေါက်နေပြီ
မြန်မာ ကားတွေကို နွေတုန်းက ညည မီးပျက်လို့ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ အဲကွန်းနဲ့ လေးနဲ့ အချိန်ဖြုန်းဖို့ သွားကြည့်တာ ရုံမှာ ထိုင်နေရတာကိုက စိတ်ညစ်စရာ ဖြစ်လာတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေကလည်း သိပ်ပေါတာဘဲ အနှစ်မပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘူး တော်တော် ညံနေတာ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ တခါသွားကြည့်ပြီး နောက်ထပ် သွားကြည့်ဖို့ စိတ်ပျက်တယ် ပေးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ကြည့်ရတာ မျက်စိနောက်တာနဲ့ မကာမိဘူး။
“ရင်ခုန်နှင်းဆီ” ဇာတ်ကားသည် ကျော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းကို ဒါရိုက်တာ အောင်ဆွေမြန်မာ မှ ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားကာ ကျော်သူ၊ မို့မို့မြင့်အောင် ၊ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၊ သက်မွန်မြင့် တို့မှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဥစ္စာပြည့်စုံပြီး တစ်ခုလတ်ဘဝဖြင့် သမီးဖြစ်သူကိုစောင့်ရှောက် မိမိငယ်ဘဝမှ နာကျည်းချက်များဖြင့် ယောက်ျားတွေ ရဲ့ မကောင်းမှုကို သမီးအား အစဉ်အမြဲနားချ ၊ မိမိသမီး အရွယ်ရောက်၍ ချစ်သူရရှိသွားသော အခါ မိခင်တစ်ယောက် ၏ တစ်လွဲစိတ်ဖြင့် သမီးကို စိုးရိမ်မှုလွန်ကွဲစွာထိန်းချုပ် ၊ ငယ်စဉ်ဘဝက အမြင်မှား မှုတစ်ခုဖြင့် လမ်းခွဲခဲ့သော ယောက်ျားနှင့် ပြန်တွေ့သောအခါ သမီး ၊ သမီး၏ချစ်သူ ၊ ယောက်ျားနှင့် မိမိအားထောင်ချောက်ဆင် ဂွင်ဖမ်းခဲ့သော ယောက်ျားတစ်ယောက် ကြားတွင် အမူအရာမျိုးစုံဖြင့် ဒေါ်နေခြည် (ဝါ) မို့မို့မြင့်အောင် မှ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Please come enjoy Myanmar (Burmese) Film Festival of Los Angeles.
now as i know in our country .. there is no education movie..everyone has to finish their live in love and comedy …they had killed by those movie only…no technology.. no education..people will finish life in this environment…so no more thinking good..come to know only how people have to step over the other.. so poor pls wake up .. wake up ..
Those movies are the symbol of weak and desperate people. Actually such movies are very dangerous for human society. Wasting time and money, Cheap thrillers only the lowest level of people watch them.